Ungayisebenzisa kanjani iDigital Touch kumilayezo nge-iOS 10 (II) | Ngivela kwa-mac
Ku ingxenye yokuqala kwalokhu okuthunyelwe, sikutshele ukuthi isici seDigital Touch, kuze kube manje, esasisebenza ku-Apple Watch kuphela, sifinyelele kanjani kwi-iPhone ne-iPad ngenxa ye-iOS 10 nohlelo lokusebenza lwemilayezo evuselelwe. Nge-Digital Touch, unga thumela imidwebo, ukushaya kwenhliziyo, ama-fireball, ukuqabula nokuningi kubangani bakho nomndeni wakho, konke ngokuthepha okumbalwa.
Sesibonile ukuthi singayifinyelela kanjani i-Digital Touch in Messages, senze futhi sithumele imidwebo noma ukumaka amavidiyo nezithombe esizithumela koxhumana nabo. Kule ngxenye yesibili sizobona ukuthi yini enye esingayenza ngalo msebenzi omkhulu.
1 Thumela ukuthinta, ukuqabula, nokushaya kwenhliziyo
2 Ngabe ufuna ukufunda kabanzi ngemilayezo ku-iOS 10?
3 Silwazisa kanjani uhlelo lokusebenza olusha lwe-iOS 10 Messages
Thumela ukuthinta, ukuqabula, nokushaya kwenhliziyo
Kukhona izinhlobo ezahlukahlukene zokuthinta ongazisebenzisa nge-Digital Touch, ngayinye inomphumela ohlukile. Ungathumela ukuqabulana, ukushaya kwenhliziyo, ukuthinta, amabhola womlilo nokuningi. Nalu uhlu lwezenzo ezitholakalayo nokuthi uzokuzuzani ngazo.
Faka umunwe esikrinini ukuze uqale umdwebo.
Ngompompi owodwa womunwe ungathumela "ukuthinta" okuyindilinga kwemibala ehlukene, kuya ngokuthi ukhethe ini.
Thumela i-fireball ngokugcina ukuthinta okuqinile ngomunwe esikrinini.
Umpompi weminwe emibili uthumela ukuqabula. Thepha izikhathi eziningi ukuze uthumele ukuqabula okuningi.
Gcina iminwe emibili esibukweni bese uzothumela ukushaya kwenhliziyo.
Bamba iminwe emibili esikrinini bese uhudulela phansi ukuze uthumele inhliziyo eshayayo bese ihlukana kabili.
Ukuthumela okuqukethwe kusuka ku-Digital Touch kungenziwa kuphela ku-iPhone ene-iOS 10 noma iwashi le-Apple eline-watchOS 2 noma 3, kepha kungabukwa kumadivayisi we-iOS ngezinguqulo ezedlule zohlelo lokusebenza, naku-Mac kusuka kokuthunyelwe kohlelo lokusebenza.
Enye into ethakazelisa kakhulu ukuthi wonke amathuluzi wokuthinta we-Digital Touch angahlanganiswa ukudala imilayezo ye-multimedia eyingqayizivele futhi wabelane ngayo nabangani nomndeni, ngaleyo ndlela wenze ukuxhumana kube mnandi kakhulu.
QAPHELA: Imiyalezo ye-Digital Touch ingeyesikhashana. Zizosuswa ngemuva kwemizuzu embalwa ngaphandle kokuthi u- "save" uthephelwa ewindini lomyalezo ukuze uzisindise unomphela.
Ngabe ufuna ukufunda kabanzi ngemilayezo ku-iOS 10?
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemilayezo emisha nezici ze-iOS 10:
Silwazisa kanjani uhlelo lokusebenza olusha lwe-iOS 10 Messages
Ngenhlanhla, iningi lethu likwazile ukuhlola yonke imisebenzi nezici zemilayezo ye-iOS 10 kusukela ngoJulayi odlule i-Apple yakhipha inguqulo yokuqala yesivivinyo yabasebenzisi ababhalise ohlelweni lwe-beta lomphakathi lwenkampani. Noma kunjalo, ngalesi sikhathi ushintsho nezinto ezintsha zazingakwazi ukuhlolwa ngesizathu esilula kakhulu: akubona bonke abasebenzisi ababene-iOS 10. Manje njengoba uhlelo seluqaliswe ngokusemthethweni, kubalulekile ukwazi ukuthi uguquko seluphelele . Akukho mkhondo wokuthi iMilayezo yayikuphi ekuqaleni kwayo, futhi singasho ukuthi sibhekene nohlelo olusha ngokuphelele emema ngempela ukuthi isetshenziswe njengohlelo lokusebenza olusha oluyinhloko lwemiyalezo.
Kuyiqiniso futhi ukuthi ezinye zezici zayo, ikakhulukazi izitika, yinto ebikade ikwezinye izinhlelo zokusebenza iminyaka. Kepha sekukonke, I-Apple ikwazile ukwenza zonke izici ezintsha zibe ngezayo.
Manje sekusele isinyathelo esisodwa kuphela, sokuthi Imilayezo ibe uhlelo lokusebenza lwe-Universal. Ngabe ucabanga ukuthi sizokubona lokhu ngelinye ilanga?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani iDigital Touch kumilayezo nge-iOS 10 (II)